China Angle grinder, impact drill, sando, li-ion drill, magetsi maturusi fekitori uye vagadziri | Boda
Zvishandiso zvemagetsi zvakawandisa zvatinoona mumusika zviri pazasi.
1. Lithium bhatiri rechargeable mutyairi / rechargeable mutyairi: iyo inokodzera kuchera maburi mukati nekubuda kwesikuru, simbi, ceramics uye mapurasitiki.
2. Rechargeable yemagetsi chibooreso chakakodzera kutendeuka mukati nekubuda screws. Kuchera kunogona kuitwawo mumatanda, simbi, ceramics uye mapurasitiki, kana kukonzeresa kukora muzvidhinha, kongiri nedombo.
3. Wrench inogona kuchinjika inoshandiswa kupinza mukati nekubuda muhukuru hwakatarwa, uye inogona kushandiswa kusungisa nekusunungura nzungu mukati mehukuru hwakatarwa.
4. Nyundo yemagetsi inodzoserwa inokodzera kukochekera pazvidhina, kongiri nedombo. Iwe unogona zvakare kuchera maburi mumatanda, simbi, ceramics uye mapurasitiki. Mushini wakashongedzerwa nemagetsi ekumhanyisa kutonga uye kumberi / kumashure mabasa anogona zvakare kusunungura / sungisa screws uye tap. Rudzi rwe
5. Electric hand drill inokodzera kuchera papurasitiki, zvedongo, simbi nehuni. Makina akashongedzerwa nemagetsi ekugadzirisa uye kumberi / kumashure mabasa anogona zvakare kutenderera uye kuchera tambo. Rudzi rwe
6. Impact drill inokodzera kukanganisa kukora pazvidhina, kongiri nedombo. Inogona zvakare kuchera maburi mumatanda, simbi, ceramics uye mapurasitiki. Models dzakashongedzerwa nemagetsi emagetsi ekumhanyisa michina uye kumberi / kudzoreredza basa rinogona zvakare kusunungura / sungisa screws uye tap. Rudzi rwe
7. Hammer chibooreso chinogona kushandiswa kune vibration kuchera pakongiri, zvidhinha pamadziro uye dombo. Mushure mekudonha kwekudengenyeka kwadzimwa, muchina unogona kushandiswa kuchera maburi pahuni, simbi, zvigadzirwa zvedongo uye mapurasitiki. Muchina wakagadzirwa nemagetsi emagetsi ekumhanyisa mudziyo uye wakanaka / wakashata zvidhinha switch inogona kutendeuka mukati / kunze screws kana kudhinda tambo. Muchina wakashongedzwa nekucheka basa unokwanisa kuita chiseling mashandiro Rudzi rwe
8. Sarudzo yemagetsi inokodzera chiseling pakongiri, pamadziro ezvitina, dombo uye asphalt. Kana zvakafanira zvishongedzo zvakaiswa, muchina wacho unogona zvakare kushandiswa kubata muzvikoko kana kupura zvakasununguka zvinhu. Rudzi rwe
9. Angle grinder inokodzera kucheka, kukuya uye kukwesha simbi yekucheka nedombo. Mvura haibvumirwe kushandiswa panguva yekushanda, uye ndiro yekutungamira inofanira kushandiswa kana kucheka dombo. Kune mamodheru akashongedzerwa nemagetsi ekudzora. Kukuya nekukorobha kunogona kuitwawo kana zvishongedzo zvakakodzera zvikaiswa pamushini wakadai. Rudzi rwe
10.Muchina wekukorobha wakakodzera kupora simbi nedombo. Rudzi rwe
11. Iyo yakananga mukuyi (ine emery vhiri rakaiswa) inokodzera kukuya simbi uye kubvisa burr. Muchina wakashongedzerwa nemagetsi ekumhanyisa mudziyo unokwanisa zvakare kuisa bhurasho, vhiri rakaumbwa-rakafanana nekugeda vhiri uye kukuya bhandi pamushini pazasi kumhanya. Rudzi rwe
12. Mutyairi wemagetsi akakodzera kutenderedza / kunze screws uye kuchera maburi mumatanda, simbi, zvedongo nepurasitiki. Rudzi rwe
13. Muchina wekutapa unokodzera yakatwasuka hole kubaya. Mushure mekuisa yakakosha zvishongedzo, bofu tapping inogona kuitiswa. 14. Impact wrench yakakodzera kutenderedza / kuburitsa sikuruu mukati mehukuru hwakatarwa, uye inogona kusungisa / kusunungura nzungu mukati mehukuru hwakatarwa. Rudzi rwe
15. Masimbi emagetsi esimbi akakodzera kucheka simbi jira, uye haizogadzi machipisi. Unogona kucheka makakombama nemitsetse yakatwasuka. Rudzi rwe
16. Yakananga yemagetsi shear / yemagetsi kubaya sheari inokodzera kucheka simbi ndiro, uye iyo simbi ndiro haizokanganisa uye kuumbika mushure mekucheka. Inogona kushandiswa yakatwasuka mutsara kucheka, yemukati gomba kucheka uye yakatetepa kukotama kona kutema. Rudzi rwe
17. Iyo diagonal saw inogona kushandiswa pakureba kwakatwasuka kutema uye kutenderera kwakatwasuka kucheka. Rudzi rwe
18. Muchina wekucheka chimiro unogona kutema ndiro yesimbi yakatwasuka uye yakatwasuka pasina kushandisa mvura. Rudzi rwe
19. Dombo rekucheka matombo rakakodzera kutsemura kana kucheka pazvinhu zvakakwirira zvemaminera (senge machena). Izvo zvinodikanwa kuti ushandise muchina pane yakagadzikana workbench uye shandisa yekudzivirira kavha. Machina ane akakosha kumisikidza anogona zvakare kushandiswa kunyorova kucheka. Hazvibvumirwi kushandisa muchina uyu kutema huni, plastiki kana simbi. Rudzi rwe
20. Muchina wekucheka kumadziro
Yakagadzirirwa mutungamiriri inotsvedza, inokodzera kucheka kana kugaya maburi pazvinhu zvine huwandu hwemaminerari (senge kongiri yakasimbiswa, zvidhinha masvingo uye asphalt pavement, nezvimwewo), pasina kushandisa mvura.
21. Curvilinear yakakodzera kutema huni, mapurasitiki, simbi, zvedongo bhodhi uye rabha pane yakagadziriswa underlay. Inogona kutema yakatwasuka tambo kana bevel angle (kusvika pamadhigiri makumi mashanu emakona).
22. Iyo inokodzera kucheka pane yakagadzikana inoshanda chikuva. Inogona kushandiswa kureba uye kutenderera yakatwasuka sawing kana diagonal sawing. Iyo yakanyanya kucheka kona ye oblique angle yekucheka ndeye 45 degrees. Rudzi rwe
23. Latex yekucheka muchina inogona kushandisa muchina uyu kutema maumbirwo akasiyana-siyana pamapurasitiki ane furo, foam furo uye zvimwe zvakafanana zvinhu. Rudzi rwe
24. Sanders / trimmers / mapuraneti akakodzera kukuya kwakaoma kwehuni, mapurasitiki, mafiringi uye nzvimbo dzakapendwa. Mushini une magetsi ekugadzirisa basa unogona zvakare kuita oparesheni yekupolisha. Rudzi rwe
25. Pfuti yemhepo inopisa inogona kushandiswa kukotamisa kana kusungira mapurasitiki, kubvisa pendi yekare uye pombi inopisa inopisa. Uye zvakare, inogona zvakare kushandiswa kunyorera, tini yakanamirwa, kusungunuka kweglue nekunyungudisa mapaipi emvura. Rudzi rwe
26. Detector yemadziro inokwanisa kuona simbi, waya, huni uye zvimwe zvinhu. Rudzi rwe
27. Laser rangefinder inogona kuyera chinhambwe, nzvimbo uye vhoriyamu, uye zvisina kunangana kuyera kukwirira. Rudzi rwe
28. Chidimbu cheLaser level ichi chiridzwa chekuyera chakakodzera kuyera nekutarisa mitsara yakatwasuka uye yakatwasuka.
Kushanda kwekona grinder:
1.Different kukuya vhiri rinogona kushandiswa kwakasiyana simbi kukuya, kucheka uye anti-ngura;
2.Dombo rekucheka ibwe rinogona kushandiswa kugadzirisa mataira, dombo, huni diki uye veneer (yakachengeteka kupfuura kutema huni pakona grinder nediki saha blade);
Iyo yekupolisha yesimbi inogona kuitwa nekushandura vhiri uye kupora vhiri.
1.Iine hunyanzvi mukuboora pane yakasimba pamusoro, kongiri, uye dombo, uye multifunctional sando yemagetsi Inogona kushandiswa panzvimbo yeyakajairika yemagetsi chibooreso uye yemagetsi kutora kana yagadziriswa kune chaiyo chinzvimbo uye yakashongedzerwa neyakakodzera chibooreso zvishoma.
Electric drill pickaxe: ine basa rakakura rekukanganisa uye nekuparadza zvinhu, sekushandisa kwaunoita sando uye chisel kushanda, asi kugona kwacho kwakanyanyisa kukwirisa kupfuura iro rebasa remaoko.
2.Musiyano mukuru pakati pemagetsi epikicha uye sando dzemagetsi mutsauko muhukuru. Sando dzemagetsi dzine simba rakakwirira dzinogona kuboora maburi makuru anonzi sando dzemagetsi, idzo dzakafanana musimboti. Ose madhiraivha ane basa rekutenderera uye kupwanya.
Iyo yekukanganisa drill inogona kushandiswa seyakajairika yemagetsi chibooreso. Iko kune shanduko-pamusoro switch pairi, iyo inogona kushandurwa kuita yakajairwa kuchera uye kukanganisa kukomba.
Simba remagetsi ekuboora e12V rakasiyana neiro re21V. Simba re12V idiki pane iro re21V.
1. Iyo yekubuda mwero wemagetsi drill bhatiri yakakamurwa muzvikamu zvakawanda. Simba re12V chibooreso chiri pa10C, uye simba iri kazhinji kutenderedza 5C.
2. Simba rinoenderanawo nesimba rinoburitswa, nekuti iro rinoburitsa voltage ye 21V yakakwira, kunyangwe kana iyo yazvino isina kukwana zvakakwana, inogona kuwedzerwa nemagetsi, saka hatigone kungoti simba ravo rakafanana, asi zvakare zvinoenderana nekugona kwavo kumira mumagetsi.
BOSENDA inopa akateedzana emidziyo yemagetsi, edu maturusi emagetsi vatengi vanobva kuEU, North America, South America, East Europe, The Middle East neSouth East Asia nyika.
Kuti uwane zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: Yakachengeteka, isina moto simbi, zvigunwe zvemunwe kodhi kukiya, ese marudzi akachengeteka
Zvadaro: Yemagetsi tepi, kupisa kutsigira tepi, PVC tepi, kuputira tepi